The Harooyinka ugu quruxda badan ee Northern Italy | Save A tareenka
Home > Tareen Safar Talyaani > The Harooyinka ugu quruxda badan ee Northern Italy
The Harooyinka ugu quruxda badan ee Northern Italy
Iyada oo qaar ka mid ah tareenada oo ugu dhaqsiyaha badan Yurub wadooyinka muuqaal dabiici ah, Safrida The Harooyinka ugu quruxda badan ee Northern Italy tareen waa dhaqaale, raaxo, oo toos ah, bixiya fikrad nolosha degaanka, inta badan la views weyn tuuraa gorgortan ah.
Iyada oo qayb ka ah bixio qorshaynta wadada oo dabacsan a jadwalka, aad si sahal ah u wada gabal kartaa faahfaahin ah ka dhigi doonaa safarka sida cajiib ah sida caga.
Booqashada Northern Italy
Sida dalal badan, Italy ayaa u gaar ah qaybi North-South la Northern Talyaaniga isufaan in ay sameeyaan laf-dhaqaale ee dalka iyo quwad warshadaha.
From muraayadaha in fashion si aannu cunto u, gobollada waqooyiga Italy ee warsan ka badan 50% dhaqaalaha Talyaani ... inkastoo ay ku jiraan in ka yar kala bar dadka dalka ee!
The 8 gobollada yihiin:
Thanks to laba safafka buur, shan harooyinka biyaha saafiga ah, hills rogid, iyo dekedaha nool, waxaa jira in badan oo kala duwan ee North Italy, xataa masaafo gaaban. Waxaad ku bilaabi kartaa toddobaadyadaada barafka ee Dolomites, laze ku saabsan in Lake Como oo afjaro safar diyaafadu on badda ee Cinque Terre!
Kuwa ka jecel fashion iyo cuntada oo aan la mid niyad. magaalooyinka Red-roofed sida Bologna waxaa affectionately tixgeliyo magaalada Italy ee gastronomic dherjinta halka duleedka Parma waa saarayaasha heer caalami ah prosciutto iyo daadi.
Markaasuu, Dabcan, waxaa jira labada magaalo ee caanka ah ee Milan iyo Venice in la ogaado in ay North of Italy! i aamini marka waxaan idinku leeyahay, booqde kasta ka heli doontaa wax in aan halkan ku jeclahay.
Waayo, dabacsanaan ugu, waa in aad jeexjeexay baabuur marka aad safarka si aad u aragto Lakes kala duwan ee Northern Italy. Haddii aad rabto in aad ku tiirsan yihiin dadweynaha gaadiidka, waa hubaal sooc.
Lakes ee Northern Italy – Lake Como
Sheeg Lake Como qof kasta oo waxaa jira fursad, indhahooda kor u iftiimin doona oo waxay odhan doonaan "George Clooney!"
Lake Como, sidoo kale loo yaqaan Lario, waa harooyinka saddexaad ee ugu weyn harooyinka Waqooyiga Talyaaniga, iyadoo si qoto dheer ugu badnaan qiyaastii 410 mitir (448 yards), sidoo kale waa mid ka mid ah harooyinka qotada dheer ee Europe.
Xaqiiqada Fast: Ma ogeyd, Its qaab dabeecad ahaan, garabaka ah rogay Y, Natiijooyinka ka soo xaabo ah glaciers weheliso tallaabada erosive ee webiga kuufurta qadiimiga ah. Tani waxay keentay in formation of the laba laamood koonfurta, oo ku dhex jira oo aan dunida caan Bellagio.
Waxay ku taallaa at cagta oo ka mid ah Alps, Lake Como bixiyaa mid ka mid ah ugu picturesque censorious ee dunida. Haddii aad doonaysid in aad soo booqato harooyinka Talyaani, aad noqon doonto yaabin in ay bartaan oo ku saabsan waxyaabo badan oo la sameeyo Lake Como ka sokow gashatid celebrity!
Anigu waxaan ahay Doonta!
Ka sokow xaqiiqda ah in helitaanka si Northern Italy by tareenka waa no-brainer, waxaan galin doonaa Shaxaadka geeyo Doonta waa quruxsan qabow aad u. Gaar ahaan haddii aad rabto in aad waayo-aragnimo Lake Como gaar at its ugu fiican.
Haddii aad tahay booqashada Lake Como maalin ama sii joogi dheer, boodi saarnaa doon, nasato oo gaaray magaalada aad ugu jeceshahay: Bellagio, Varenna, sida, ama waxaa laga yaabaa mid ka mid ah Villas taariikhiga ah on xeebaha u gudubno,.
Milan in ay Tareenadu Lake Como
Turin si Tareenadu Lake Como
Padua in Tareenadu Lake Como
Venice in Tareenadu Lake Como
Lake Garda waa mid ka mid ah Harooyinka ugu weyn ee Northern Italy iyo ugu weyn ee u gudubno, glacial ee Italy shan harooyinka, quudiyo ee Alps ee waqooyiga. North of Verona, Lake Garda waa qoyska ugu – iyo biyo sports-oriented harooyinka Italy. Sidoo kale waa harada ugu weyn Talyaaniga, ka imaanaya magalaada Alpine uga yaacday ilaa cidhifka Waqooyi ee Valley Po ah.
xeebta koonfureed waxaa damacsan by xeebaha iyo taageeray by hills hooseeyo. Iyada oo ku yaalla waqooyiga, buuraha iyo qarar sheer faraq u gudubno,, gaar ahaan hareeraha galbeedka xeebteeda. Its dhul siinayaa ah u gudubno, kala duwan oo ballaaran soo jiidashada leh, waayo, sports-jecel dalxiisayaasha. From Dabaylaha joogto ah u dhoofaysa iyo windsurfing buuraha waayo, fuulitaanka, rappelling, iyo baskiillada buuraha, dhan la views baddii.
news xataa si fiican. goobta Lake Garda ayaa waxay siinaysaa cimilada qoraxda sanadka oo dhan meesha iyo Saytuun, iyo liin si fiican u koraan woqooyi ee ay kala duwan sida caadiga ah. Perfect qaar ka mid ah galabtii G&T! Ku dar bacaadka dheer xeebaha iyo xajin ah magaalo views promenades harada. Waxaad adigu iskaa u helay kaamilka ah fasaxa caga!
Haddaba sidee baad aad dareento sida samaynaya socday si aad u aragto qaar ka mid ah Lakes ee Northern Italy? Ma doonaysaa in la badbaadiyo waqti iyo lacag halka Ku safridda Waqooyiga Talyaaniga tareen? Jartaan oo dhan tigidhada tareenka adiga oo isticmaalaya Save A tareenka in daqiiqo, oo aan ajuurada qarsoon!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/beautiful-lakes-northern-italy/- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ja si / ama / TR iyo luuqado badan.
#Lago #gudubno #LakeComo #LakeGarda #NorthItalyTravel northitaly NorthItalylakes
Restaurant Best Yurub Michelinguiden Guide